BlogPad - I-WordPress Editor ye-iPad - Geofumed
NgoJanuwari, 2014 Apple - Mac, Internet kunye neBlogs, Ukuprinta kokuqala
Ekugqibeleni ndafumana umhleli ondiwanelisayo kuye iPad.
Nangona i-WordPress iqonga elikhulu lokubloga, apho kukho iikhompyutheni kunye neziplagi eziphezulu, ubunzima bokufumana umhleli omhle bekusoloko kube yingxaki. Idesktop ndiyakwazi ukufumana into.
Ndizama iBlogPress, i-WordPress ye-iOS, i-Blog Docs, kwaye ifike kuphela ekuhlaleni Blogsy, nangona ndagqibela ukuya kule yodwa kuphela kwimiba evelayo kuba ihlala ihlala isenza i-retouching kwi-editor online.
Ngenye yezinto eziphambili, ndafumana iBlogPad kwaye ndiyakwazi ukuthetha ngokuqinisekileyo ukuba yenza phantse yonke into ye-WordPress fan ifake kwi shishini lakhe.
Yintoni eyenza iBlogPad Pro ingcono umhleli weWindowsPress
Mhlawumbi amandla eBlogsy bubuthakathaka bawo obunzima, kuba xa uxhaswa ngamanqwanqwa amaninzi (iBlogger, Tumblr, Joomla, TypePad, njl.), Lenza ingqalelo kwiinguqu ezininzi zinciphise ukusebenza kakuhle. Ndiyakhumbula ukuba ndayeka emva kokuba ndihlaziye iWindowsPress kwafuneka ndihlele umgca wefayile ye-xmlrpc, kwaye xa ndibikile bangithumelela umyalezo
Ngaphantsi apho bathetha ukuba oku kusombulula ...
Ukukwazi ukwenza utshintsho kwinguqu elandelayo yesicelo.
I-BlogPad isebenza kuphela kwi-WordPress, makube ngamasayithi abanjwe okanye kwi-WordPress.com, kwaye xa i-xmlrpc andazi ukuba bayayenza njani, kuba i-toy ikwazi ukukhangela nokuyicombulula, nokuba ikhona kwenye indawo. Kwakhona ngenxa yokuba nguye kuphela WordPress, iye lula ukuphumeza iimpawu ephambili ngokukhawuleza kakhulu, oko ke kumele kube lula Blogsy kufuneka wenze utshintsho nendlela yokujongana ngobekuphandwa aluchaphazeli amanye amaqonga.
Olunye uncedo olukhulu lweBlogPad yinto eqhelekileyo yendlela yokwenza imisebenzi. Leyo yayiyingxaki ngeBlogsy, ukuba ngendlela yabo yokuphambanisa yokufuna ukubamangalisa, babenezinto ezingaqhelekanga, njengokuchofoza okukodwa ukuhlela imifanekiso, ukurhola ngeminwe emibini ukushenxisa kumhleli wemizobo ukuya kukhowudi ... kwakulula kakhulu ukwaphula umxholo ekuhambeni okugwenxa. zeminwe Ixesha libenze baphendukela kumaqhosha kunye nokufikelela ngokulula kodwa oko kwakubonisa ukungahambelani kunye nokuchitha ixesha. Kulungile ukuyila into entsha, kodwa iindawo ezinxibelelanayo zomsebenzisi "ziyasebenziseka", ukuba azidingi ncwadana inemigaqo okanye amaqhinga afihlakeleyo, ziya kuxatyiswa.
Ezi ziyimpawu ezithile kule mihla emithathu, ndifumene ukuba ndiyathanda iBlogPad:
I-spell checker. Beka enye upelo ulwimi kunye interface ulwimi, ukubamba igama elibhalwe kuphakamisa ukhetho lwamagama kunokwenzeka, kwaye concealer yenza uhlobo Microsoft Word hambo, ebonisa iingcebiso endaweni eyodwa, indawo yonke kwaye ufake kwi-magama. inkxaso Upelo iilwimi ezininzi, kuquka iSpanish, Portuguese, isiFrentshi, Italian kunye iinguqulelo ezahlukahlukeneyo Inglés.También sixhasa kakuhle kakhulu abalinganiswa, ezinye izicelo zigcinwa ikhowudi njengommakishi ofuna ukuyihlela kwabo WordPress intanethi ukulawula, nakuba ukuba uba ibonakale ngokuchanekileyo kule ncwadi.
Umhleli weWYSIWYG. Eli gama lithetha ntoni Ubone Ngaba Ufumana, ndikhumbula ukusukela ukuba indawo DOS Windows iphinde isebenzise ingcamango esebenza ngayo kubhabho ngaphandle izimanga xa ushicilela okanye nokupapasha (koko ukubonayo ukuba into ufumana) .Ngokuba lo BlogPad uye amaqhosha ukuba nabani na wasebenzisa Microsoft Word uyazi: iimbumbulu, tab lungqamane, izimbo bomgca, ngaphakathi, amanani, njl
Kodwa eyongezelelweyo kule nto ndiyithandayo iqhosha lomgca welayini esazenza ngokungena kwe-Alt +, xa kunokwenzeka xa sifuna ukulandela umhlathi omtsha kwi-bullet efanayo; Kwakhona iqhosha lokudala iibhile eziyimfuneko kakhulu.
Xa ukhetha igama, okukhethwa kukho okubonakalayo kwimenyu: ikopi, unamathisele, unesibindi, isitayela, kuquka inkcazo kwisichazamazwi sokhetho lwethu.
Ukudala ii-hyperlink, unokukhangela umxholo ngaphakathi kwiblogi. Oku kuhle
Ngokubanzi, ukusetyenziswa kusebenza kakuhle; unobumba uhlambulula ifomathi ngaphandle kokukhetha unonophelo olukhethekileyo, kungekhona ngenxa yokuba enye ingapheli, kodwa ngenxa yento iblogi ifuna.
Umphathi wesithombe. Ingeniswa kwi-tablet, thatha ubomi, url, iDropbox okanye iGoogle Drive. Kodwa into engcono kakhulu ekukhethweni kokukhetha ubungakanani, ukukwazi ukushiywa kwisisombululo esiphezulu nge hyperlink okanye isicelo siya kuguqula ubukhulu obukhethiweyo. Inkxaso yokulungelelanisa iyinto enhle, into ehlulekayo kunye nezinye izicelo. Akuyi kuba kubi ukuba isicelo sifake ukusebenza kweCatchout engenayo ngoku.
Kwakhona kukuvumela ukuba ukhethe ukuba yeyiphi umfanekiso oza kugqitywa. Ndiyakhumbula ukuba ndifuna ukushiya uMlobi oPhila kwiMicrosoft Word kwaye oku kuphazamiseka kwakwanele ukuyixotha.
Ngokuqhelekileyo, isicelo sihle kakhulu. Ngaphandle kokulawula ukungena, ukusuka kwimenyu yecala ungakwazi ukufikelela kumaphepha, imifanekiso, iindidi, iileyibhile, kunye nokucoca ngale miqathango. Ungabona imibono, ukuhlela, utshintshe isimo okanye impendulo; imisebenzi esebenza ngokusenza senze imisebenzi eyenzeka kuphela ngokufaka i-WordPress ... nangona ikwazi ukufikelela kwideshibhodi.
Iiblogi eziphathwe kwiWindowsPress.com zivelisa iifomati zePlay Plugin. Qaphela ukuba oku akunakho inkxaso kwiiblogi ezithathiweyo kwaye kunokudala ingxaki yokuxhumela kude kunye ne xmlrpc.php.
Kwaye njengomhleli womsebenzi ongaxhunyiwe kwi-intanethi kucatshangwe kakuhle. Kuyathakazelisa indlela unokhetho olukhethiweyo lokuhlela umxholo kunye nezicwangciso zokuhlela, ngoko akudingeki uvule ukungena ukulawula iinkalo ezifana neendidi, iilebula, umfanekiso ogqityiweyo, isimo somshicileli, i-slug, ukukhishwa, njl. Kulo iqhosha elikwinqanaba lezona zifikeleleko eziqhelekileyo: ukushicilela, ukuhlaziya okanye ukusuka kushicilelwe, susa kwaye ukhangele.
Ukongezelela, uqwalaselo lubanzi ngokubhekiselele kulo:
Inani lezinto ezifumaneka ngaphandle,
Ukuphindaphinda kwemoto egcinwe,
Ubungakanani obukhulu bokuqukethwe kwe-multimedia
Ubungakanani befonti bobukhulu
Ekugqibeleni, isicelo esikhulu. Ndiya kuhlawula ngaphezu kweedola ze-4.99 ukuba ngaba ndiyazi konke akwenzayo. Kucelwa ukuba iblogi izinikele kwi shishini lakhe: ubhale.
Yiya kwiphepha le BlogPad Pro
Khuphela kwi- Apple Isitolo
Post edlulileyo«Edlulileyo Iikhosi zeMephu zeGIS: ezilungileyo zikhona.
Post Next Yintoni enokuyenza xa i-iPad ibiweOkulandelayo "